सुदर्शन र प्रदीपको सहकार्य यसकारण आवश्यक छ « Ramailo छ
सुदर्शन र प्रदीपको सहकार्य यसकारण आवश्यक छ
निर्देशन सुदर्शन थापा ‘मधुमास’ र ‘चखें शखें पखें’को असफलताको रन्कोमा थिए । यता प्रदीप खड्का चाहीं आफैंले निर्माण र अभिनय गरेको फिल्म ‘इस्केप’ फ्लप भएकाले तनावमा थिए । फिल्म लाइन छोडेर विदेश जान तम्तयार थिए । यहीबेला सुदर्शन र प्रदीपले एकसाथ काम गरे, ‘प्रेम गीत’मा । लभ स्टोरी फिल्म बनाउन माहिर सुदर्शनले प्रदीपलाई नयाँ अवतारमा प्रस्तुत गरे । प्रदीपको अपोजिटमा थिइन, पुजा शर्मा । प्रदीप र सुदर्शनसँग गरिएको यो रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
जब प्रेमगीत प्रदर्शन भयो, पुजा र प्रदीपको भाउ ह्वात्तै बढ्यो । प्रदीपलाई अनमोल केसीको विकल्पमा हेरियो भने पुजाको स्टारडमले उस्तै लोभलाग्दो देखियो । साँच्चै ‘प्रेम गीत’ले प्रदीप र पुजालाई स्थापित गरियो । जसको पहिलो जस निर्देशक सुदर्शनलाई जान्छ । त्यसपछि निर्माता सन्तोष सेनलाई । यो टिमले फिल्म वृत्तमा कमाल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । दुर्भाग्य यो भइदियो की प्रेम गीतको सफलतासँगै यो टिम फुट्यो । सुदर्शन–पुजा एकातिर, प्रदीप–सन्तोष अर्कातिर भए । यी चारको व्यावसायिक सम्बन्ध मात्र होइन, व्यक्तिगत सम्बन्धमा समेत दरार आयो, बोलचालै बन्द भयो ।
सुदर्शन पनि के कम, उनले नयाँ फिल्मको घोषणा गरे, ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ । जसमा हिरो थिए, पल शाह । हिरोइन त पुजा हुने भइहालिन् । नभन्दै यो फिल्म बक्स अफिसमा हिट भएन मात्र, पल शाह स्टारको लाइनमा उभिए । उता, प्रदीपले प्रेमगीत २ मा अश्लेषा ठकुरीसँग रोमान्स गरे । बिग बजेटका यस फिल्मलाई लगानी उठानै मुस्किल पर्यो।प्रदीपकै अभिनयले अपेक्षाकृत तारिफ पाएन ।
त्यसो त सुदर्शनका लागि प्रदीप उत्तिकै आवश्यक छन् । जस्तो पलसँगको सहकार्यले निरन्तरता पाएन । ‘रामकहानी’मा आकाश श्रेष्ठलाई प्रवेश गराए तर दर्शकले पुजा र प्रदीपको जोडी खोजिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यही आशयका प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका हुन्छन् । सुदर्शनले पनि प्रदीप लुक्स मात्र होइन, अभिनयमा अब्बल भन्दै आइरहेका छन् र फ्यानका लागि खुशीको खबर, उनीहरुबीच भेटघाट हुन थालेको छ । त्यसो भए के सुदर्शनको निर्देशनमा पुजा र प्रदीपलाई फेरि एकसाथ देख्न पाइएला त ?
ढिला होला तर त्यो सम्भावना हुदै नभएको भने होइन । पछिल्लो भेटघाटले त्यही देखाउँछ । आ–आफ्नो करिअरलाई गति दिन सुदर्शन र प्रदीपको टिमअप अपरिहार्य छ । कारण, न अहिले नै सुदर्शनले प्रदीपजस्तो स्टारडम र अभिनय क्षमता मिश्रण भएको अर्को अभिनेता भेट्न सक्छन् । न प्रदीपले नै सुदर्शन बाहेक आफ्नो छवि अनुरुप आफूलाई अझ तिखार्ने अर्को निर्देशक भेटाइहाल्ने अवस्था छ ।
त्यसैले पुरानो शत्रुता त्यागेर सुदर्शन र प्रदीपले फेरि सहकार्य गर्लान अपरिहार्य रहेको धेरैको ठम्याइ छ ? सायद दर्शक पनि सुदर्शनको एक्सन कटमा प्रदीप र पूजाको जोडी हेर्न आतुर छन् । यसमा निर्माता सन्तोष सेन जोडिए सुनमा सुगन्ध हुनेछ ।